BlueMail: safidy maimaim-poana, fa tsy maimaimpoana na misokatra amin'ny Thunderbird | Avy amin'ny Linux
Omaly, namoaka ny momba ny kinova farany an'ny Thunderbird, ny isa 78.5.1. Ary amin'ity iray ity dia manonona hatrany izahay 6 safidy tsara maimaim-poana sy misokatra mitovy. Ary eo afovoan'io fikarohana io dia nifankahita izahay BlueMail, na dia tsy izany aza fampiharana na maimaim-poana na tsy misokatra, maimaim-poana ary manana fiasa mahaliana sy mahasoa izy io.
Ny iray amin'ireo fiasa na toetra mampiavaka azy dia ilay izy sehatra maro, ary vokatr'izany, efa elaela io, iray amin'ireo fampiharana an'ny Mpanjifa mailaka ankafizin'ny mpampiasa an-tapitrisany Android sy iOS. Noho izany, ho an'ireo izay efa mampiasa azy amin'ny azy finday, dia ho tombony lehibe ny fampiasana azy amin'ny anao Operating System maimaimpoana ary misokatra GNU / Linux.
Ho an'ireo izay tsy mahalala sy / na tsy namaky ny famoahana anay teo aloha tamin'ny Thunderbird, izay ilazanay ihany koa ary anoloran-kevitra hahafantatra BlueMail, avelantsika eto ny rohy eto ambany, aorian'ny fiheverana azy Thunderbird, ho an'ireo tsy dia mahalala loatra momba ilay fampiharana:
"Thunderbird dia mailaka loharanom-baovao maimaim-poana sy misokatra, vaovao, chat ary kalandrie kalandrie izay mora amboarina sy ampanjifaina. Ny iray amin'ireo fitsipika fototra ao amin'ny Thunderbird dia ny fampiasana sy fampiroboroboana ny fenitra misokatra - ity fomba fiasa ity dia fandavana ny tontolontsika amin'ireo sehatra mihidy sy serivisy mihidy izay tsy afaka mifampiresaka. Tianay ny mpampiasa anay hanana fahalalahana sy safidy momba ny fomba fifandraisan'izy ireo." Thunderbird 78.5.1: Vaovao sy zavatra hafa, an'ny kinova farany navoaka.
1 BlueMail: Mpanjifa mailaka maimaim-poana ho an'ny Linux
1.1 Inona ny BlueMail?
1.2 Momba ny Android
1.3 Momba ny Linux
BlueMail: Mpanjifa mailaka maimaim-poana ho an'ny Linux
Inona ny BlueMail?
Tsara sy mahasoa izy io Fampiharana mailaka sy tetiandron'ny mpanjifa cross-platform, dia voalaza ao amin'ny tranokala ofisialy toy izao manaraka izao:
"BlueMail avy amin'ny Blix Company, dia mailaka eran-tany malalaka sy noforonina tsara, afaka mitantana kaonty mailaka tsy manam-petra avy amina mpamatsy isan-karazany, mamela ny fampandrenesana fanindriana ary fandefasana mailaka vondrona miaraka amin'izay. Ny rindranasan'ny BlueMail dia mifandray mivantana amin'ny mpizara mailakao ary izy no soloina tonga lafatra ho an'ny mailaka nomaninao ho solon'izay".
Momba ny Android
fa nomena BlueMail, teraka ary nivelatra nandritra ny fotoana ela tao amin'ny Sehatra finday Android sy iOS, marihina, fa tsy miova sy tsy miova Android, manana tsara Naoty (4.6) ary amin'izao dia mandeha ho an'ny Malagasy Bible 1.9.8.4 miaraka amin'ny fampiharana an'ny Habe 46 MB, ary nohavaozina tsara izy io, satria, ny daty ny fanavaozana farany azy: 31 Oktobra amin'ny 2020. Raha mila fanazavana fanampiny dia azonao atao ny mitsidika ity manaraka ity rohy.
Momba ny Linux
Hahafantatra bebe kokoa momba BlueMail Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny miditra amin'ireo fizarana misy ny fampiasa sy ny toetra mampiavaka azy amin'ny manaraka rohy, raha te hahalala bebe kokoa momba izany, fa manokana momba ny Linux dia tsy maintsy miditra amin'ity hafa ity ianao rohy.
Ao amin'ny farany, afaka mampifandray rohy isika misintona BlueMail ho an'ny Linux, amin'ny endrika fonosana isan-karazany, izay:
Mora ihany ny fametrahana azy, satria, ohatra, ao amin'ny Debian rehefa avy alaina, miaraka amin'ny Didy baiko tsotra 2, efa ananantsika ny asany:
tsarovy, BlueMail dia mety raha mbola Thunderbird na fampiharana maimaim-poana sy misokatra hafa mitovy amin'izany dia tsy manome fahafaham-po ny takinay, na rehefa ny Fampidirana finday / Desktop ilaina sy tsara.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «BlueMail» novela, ilaina ary mahaliana Mpanjifa mailaka marobe amin'ny birao solosaina, fa mpampiasa an-tapitrisany amin'ny Android sy iOS; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » BlueMail: safidy maimaim-poana, fa tsy maimaimpoana na malalaka ho an'ny Thunderbird
Omaly aho nanandrana Thunderbird ary tsy tiako izany, tsy haiko raha ny fahazarana kely amin'ny fampiasana azy na hoe tsy dia miasa loatra, tena tsy dia fantatro tsara fa priori tsy tiako ny interface.
Ampiasaiko ao amin'ny Linux Debian 10 Sylpheed 3.7.0 ary amin'ny Win 10 iray antsoina hoe The Bat, samy hafa be izy ireo.
Andramo angamba ity Blue Mail ity mba hahitanao ny fandehany.
Fa tsara ny manandrana ny loko hehe, arahabaina daholo
Miarahaba anao, Octavio. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Tsy fantatro, "The Bat" na dia hitako aza fa ho an'ny Windows ihany io. Manantena aho fa hanompo anao ny Bluemail. Tsy ho ela dia manantena ny handinika bebe kokoa momba ny Bluemail izahay.
Raha sendra mampiasa fandresena ianao dia azonao andramana izany, ny tiako holazaina amin'ny The Bat, ho hitanao fa mpanjifa mailaka tena feno izy io. Izy io dia manomboka amin'ny XP mandroso.
Ekolojia: Ahoana no ahafahan'ny rindrambaiko maimaim-poana manampy amin'ny famonjena ny planeta?